Uyifaka njani ipakethi yolwimi kwiWindows, kubandakanya iSpanish | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | software, Windows
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kanjani faka ipakethi yolwimi kwiWindows 7 okanye nayiphi na enye inguqulelo yenkqubo yokusebenza yeMicrosoft? Enkosi ngento yokuba iMicrosoft yeza kunikezela uluntu lonke ngenguqulelo yayo Windows 10 kuhlobo lovavanyo olunenombolo ye-serial efakiweyo, Abantu abaninzi bayikhuphele kwaye ngoku bayayivavanya fumanisa izinto zayo ezintsha.
Nangona ezi zindaba ezimnandi, ngelishwa iinguqulelo ezahlukeneyo esinokuzikhuphela zifumaneka kuphela kwinani eliqingqiweyo leelwimi. Ngokuqinisekileyo ukuba kungekudala iipakethi zolwimi ze Windows 10 izakuvela kwiMicrosoft njengohlaziyo, okanye njengefayile yokukhuphela kwiiseva zabo. Ngesi sizathu, ngoku siza kuthetha iqhinga lokufaka ipakethi yolwimi kwiWindows eya kukunceda xa usenza ngokwezifiso le nkqubo yokusebenza ngolwimi esilifunayo.
1 Uyifaka njani ipakethi yolwimi kwiWindows
2 Uyikhuphela njani ulwimi lwaseSpain ngaphakathi Windows 10
2.1 Indlela yokutshintsha phakathi kweelwimi Windows 10
3 Uyikhuphela njani ulwimi lwesiSpanish kwiWindows 8.x
4 Uyikhuphela njani ulwimi lwaseSpain ngaphakathi Windows 7
Icebo esiza kulicebisa ngalo ngoku linokusetyenziswa ukusukela Windows 7 ukubheka phambili xa ipakethi yolwimi esinomdla kuyo ikho; Ukwenza oku, sicebisa ukuba ulandele la manyathelo alandelayo:
Qala iseshoni yeWindows.
Ngoku usebenzisa indlela emfutshane yebhodi yezitshixo Yinqoba + R.
Esikhaleni bhala: Ukusekwa kweLPK
Cinezela i «Entrar«
Ukusuka apha uya kuba nakho ukwenza nawuphi na umsebenzi onomdla kuwe, oko kukuthi, oko kwe Faka okanye Khipha ulwimi. Kwimeko apho kufanelekileyo, siya kuzama ukukhetha ukhetho lokuqala, oko kukuthi, oluya kusivumela ukuba "sifake iilwimi".
Ngokukhetha olu khetho siza kutsiba kwelinye icandelo lefestile kwaye apho, siya kuba nethuba faka ipakethi yolwimi kwiinkonzo zohlaziyo kwiWindows okanye kwikhompyuter yethu; Olu khetho lokugqibela lunokusetyenziswa ukuba nje siyikhuphele iphakheji kwikhompyuter yethu. Ukuba ngaxa lithile siyazi ukuba uMicrosoft okanye umntu ophuhlise iqela lesithathu uphakamise ulwimi ngeSpanish Windows 10, singasebenzisa eli qhinga kunye nendlela ukuze sikwazi ukwenza ngokwezifiso inkqubo yokusebenza ngendlela esiyithandayo.
Uyikhuphela njani ulwimi lwaseSpain ngaphakathi Windows 10
Inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza kaMicrosoft, Windows 10, ihambisane nenani elikhulu lokuphuculwa, hayi ngokubhekisele kwintsebenzo ebonisa ukusebenza okungcono kunabo bonke ababengaphambi kwayo, kodwa ikwasizisela uphuculo ngokubhekisele kufakelo lweenkonzo okanye ongezelelweyo, ukuze kungabikho mfuneko yokuba siye kwiwebhusayithi kaMicrosoft nangaliphi na ixesha ukuya kukhangela ezinye, njengoko kule meko kunokuba njalo ulwimi lwenguqulo yethu yeWindows 10.
Xa ukhuphela i-ISO kwiWindows 10 iwebhusayithi, iMicrosoft isinika ukhetho lokukhetha ulwimi lofakelo ukuze, kuyo yonke le nkqubo, imiyalezo iboniswe kulwimi lweCervantes. Kodwa ukuba nasiphi na isizathu sinyanzelekile ukuba sitshintshe ulwimi kuhlobo lwethu lweWindows, Akunyanzelekanga ukuba sibuyele ekuqaleni kwaye sifake ingxelo entsha Windows 10, kodwa ngokuthe ngqo kwi Windows 10 ukhetho lokumisela sinokukhuphela ipakethi yolwimi kwaye simisele ukuba yeyiphi na esifuna ukuboniswa ngokungagqibekanga.
Ukukhuphela ipakethi yolwimi entsha ngaphakathi Windows 10 kufuneka qhubeka ngolu hlobo lulandelayo:
Siye phezulu Useto> Ixesha noLwimia.
Kwikholamu yasekhohlo, cofa apha Ingingqi kunye nolwimi
Kwicandelo lasekunene siye kwiiLwimi kwaye ucofe ku Yongeza ulwimi.
Apha ngezantsi kukho zonke iilwimi ezikhoyo esinokuzikhuphela kwiWindows 10. Kufuneka nje sikwenze khetha ulwimi esilufunayo kwaye kunjalo.
Indlela yokutshintsha phakathi kweelwimi Windows 10
Nje ukuba siwenzile onke amanyathelo angaphambili, kufuneka sikhethe ulwimi esifuna ukulusebenzisa kuhlobo lwethu lweWindows. Apha ngezantsi kuyakuvela iinketho ezintathu: Cwangcisa njengokumiselweyo, Khetha kwaye ucime. Kule meko ithile Sikhetha ukuseta ngokungagqibekanga ukuze ulwimi lwenguqulo yethu Windows 10 itshintshiwe esikhethe kuyo. Ukuba siyayifuna iya kubuyela kulwimi lwethu lweenkobe, kufuneka senze amanyathelo afanayo ekukhetheni ulwimi lweSpanish (ilizwe apho sikhona)
Uyikhuphela njani ulwimi lwesiSpanish kwiWindows 8.x
Inkqubo yokukwazi ukukhuphela iilwimi ezintsha ukutshintsha enye esiboniswa yiWindows ngokwendalo ngokufanayo nento esinokuyifumana Windows 10. Inkqubo yile ilandelayo:
Sisiya kwi Iphaneli yokulawula
Ngoku siya phezulu ULwimi kwaye ucofe ku Yongeza ulwimi.
Emva koko kufuneka sifumane ulwimi esifuna ukulifaka kuhlobo lwethu lweWindows 8.x. ukhethe kwaye ucofe ku Yongeza.
Nje ukuba songezwe, kufuneka sicofe kulwimi esiludibisileyo kwaye silukhethe Khuphela kwaye ufake ipakethe yolwimi, ukuze iiWindows zikhathalele ukukhuphela kwiPC yethu.
Nje ukuba ukhutshelwe, khetha ulwimi kwaye kuya kufuneka qala ikhompyuter yethu ukuze ulwimi olusibonisa ngalo iWindows 8.x lusitshintshele kule silukhethileyo.
Uyikhuphela njani ulwimi lwaseSpain ngaphakathi Windows 7
IWindows 7 isinika ngendlela efanayo neenguqulelo ezimbini zenkqubo yokusebenza kaMicrosoft ukuze sikwazi ukongeza iilwimi ezintsha, ke kuya kufuneka sityelele iwebhusayithi kaMicrosoft ukukhuphela ulwimi esifuna ukulufaka. Ezona lwimi zisetyenziswa kakhulu Singafumana ngokuthe ngqo kuhlaziyo olwahlukileyo lweMicrosoft ikhuphe kuyo yonke inkxaso yale nguqulo, kodwa ayizizo zonke ezikhoyo.
ISpanish, ngaphandle kokuya phambili, iyafumaneka ke ukuba sifuna ukutshintsha ulwimi lwenguqulo yethu yeWindows 7 kufuneka siye kwicandelo loLwimi elikhoyo kwiPaneli yokuLawula. Ukuba ngokuchaseneyo, Sifuna ukufaka nayiphi na ipakethi yolwimi kwiWindows ayisiyiyo ngokwendalo kuhlobo lweWindows 7 esiyifakileyo, sinako Ndwendwela iphepha lenkxaso likaMicrosoft kuzo zonke iilwimi ezikhoyo okwangoku le nguqulo yeWindows.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyifaka njani ipakethi yolwimi kwiWindows
Busuku benzolo! Ndingathanda ukwazi ukuba ndingayikhuphela phi ipakethi yolwimi oyithetha apha ukuze uyifake. Ndiyacela.
Namhlanje i-07/11/2017 ayisebenzi, enkosi!
Molo, yonke into iluncedo kakhulu, kodwa imeko yam kukuba ukumiselwa kwam kunganginiki ukhetho lwesithathu "lokuseta njengelimiyo" xa ndongeza ulwimi lwaseSpanish. Ndiyicimile kwaye ndiyikhuphele itoni yamaxesha kwaye ayikandiniki olo khetho. Andazi ukuba ndenzeni kwakhona = (
Inqanawa yokuqala yeenkwenkwezi sele ihamba esibhakabhakeni